सुमनले छोरीहरूलाई अँगाल्दै भने- राम्रो काममा हतकडी लगाएको, डराउनुपर्दैन - Himali Patrika
सुमनले छोरीहरूलाई अँगाल्दै भने- राम्रो काममा हतकडी लगाएको, डराउनुपर्दैन
हिमाली पत्रिका १९ फाल्गुन २०७७, 11:33 am
त्यहाँ हर्षोल्लासका साथ उनीहरूलाई अबिर-माला र खादाले स्वागत र सम्मान गरियो। विरोध कार्यक्रमका सहभागीले सायमिको रिहाइमा जितको नारा लगाए। सायमिले ‘मलाई नेपाल भाषा बोल्दा जेल कोचियो’ भनेर लेखिएको प्लेकार्ड बोेकेका थिए।
छोरीहरूलाई अँगालेपछि सुमनले हामीतिर हेर्दै भने, ‘मैले यिनीहरूलाई कहिल्यै यसरी छाडेको थिइनँ। मलाई पुलिसले समातेको थाहा पाउँदा यिनीहरू एकदमै डराएका थिए। सानी छोरीले त हतकडी लगाएको देखेर चोर-डाँकालाई पक्रेजस्तो ठानिछन्। मैले उनलाई ‘यो हतकडी राम्रो कामका लागि लगाएको हो, त्यसैले डराउनुपर्दैन’ भनेर सम्झाएँ।’
‘म त उनीहरूको हालखबर बुझ्न गएको थिएँ। उनीहरूलाई केही चाहिएको छ कि, चिया-खाना खायो कि खाएन, उपचार गर्‍यो कि गरेन भनेर सोध्न गएको थिएँ।
हामी सबै नेवा: भएकाले सजिलोका लागि नेपाल भाषामा कुराकानी गरेका थियौं। एक जना प्रहरीले नबुझ्ने भाषा नबोल्नू भन्नुभयो,’ सुमनले हामीसँग भने, ‘मलाई प्रहरीले त्यसो भनेको मन परेन।
मैले कुन भाषामा कुरा गर्ने भनेर प्रहरीले आदेश दिने होइन। हाम्रो मातृभूमिमा नेपाल भाषा बोल्न पाउनु हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो। यही कुरा प्रहरीलाई भन्दा उनीहरूले धरपकड गर्न थाले।’
सुमन कालिमाटीका चर्चित वामपन्थी नेता जीवनराम मानन्धरका छोरा हुन्। कालिमाटीमै उनीहरूको पुरानो मिठाइ पसल र होलसेल पसल छ। वडा नम्बर १३ का बासिन्दामा ‘जीवनदाइको मिठाइ’ भनेपछि नाम नसुन्ने कमै छन्। सुमनले आफ्नो बाबुबाट राजनीतिमा धेरै संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने देखेका र बुझेका थिए। त्यही भएर उनमा राजनीतिभन्दा व्यापारतिरै बढ्ता लगाव थियो।
उनको जिन्दगीको यो ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ छ वर्षअघि आएको थियो, जब कालिमाटीका घरहरूमा डोजर चलाएर सडक विस्तार गर्न खोजियो। उनको आफ्नै घर पनि त्यसमा पर्थ्यो।
‘मलाई जहिले पनि ठूलो सडक चाहिन्छ भन्ने लाग्थ्यो। कसैले पनि यो विकास होइन, विनाश हो भन्ने बुझाएका थिएनन्,’ मंगलबार मैनबत्ती र्‍याली सकिएपछि राति अबेरसम्म हामीसँग लामो कुराकानी गर्दै सुमनले भने, ‘जब मेरो आफ्नै घरमा डोजर चल्ने अवस्था आयो, बल्ल म झल्याँस्स भएँ।’
उनले अगाडि भने, ‘त्यति बेलासम्म मलाई डोजर चलाइने भनेको कागजपत्र नभएका वा मापदण्ड मिचेर बनाइएका घरहरूमा होला भन्ने लाग्थ्यो। तर, म गलत रहेछु। हाम्रो घर कानुनी रूपमा पक्का छ। सबै कागजपत्र छ। कुनै मापदण्ड हामीले मिचेका छैनौं। त्यस्ताे ठाउँमा पनि दिनदहाडै कानुन उल्लंघन गरेर, हामीसँग भएका सरकारी कागजपत्र बेवास्ता गर्दै सरकार आफैं डोजर चलाउन र हामीलाई सुकुम्बासी बनाउन कस्सिन्छ भने हाम्रो अधिकार रक्षा कसले गर्ने? सारा नियम-कानुन लत्याएर पुलिस नै आतंक मच्चाउन आउँछ भने हाम्रो हकको पक्षमा को बोल्ने? यही सोचेर म सडकमा आउन बाध्य भएँ।’
उनले यो पनि भने, ‘त्यो घटनाले मलाई सिकायो, मान्छेको भावना भनेको आफ्नो घर र आफ्नो भूमिसँग जोडिएको हुँदो रहेछ।’
‘म पेसाले व्यापारी हुँ। व्यापारले सामूहिकता सिकाउँछ,’ उनले भने, ‘व्यापार होस् या संघर्ष, सामूहिक रूपमा अघि बढे मात्र लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ। हाम्रो शक्ति भनेकै हाम्रो एकता हो।’
‘बाइपासबाट ३९ घरपरिवारलाई बिनामुआब्जा विस्थापन गरियो,’ सुमनले भने, ‘आफू जन्मे-हुर्केको घर उजाडिनुको यस्तो पीडा कसैले भोग्नु नपरोस्।’
‘जेलमा कोचे पनि मलाई कुनै डर लागेन, किनभने दुःख नभई सुख हुँदैन भन्ने मलाई थाहा छ। यहाँ आफैं नउठेसम्म केही हुँदैन भन्ने मैले बुझिसकेको छु। हामीले आफ्नो भूमि, आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृति र आफ्नो पहिचानको रक्षाका लागि दुःख नगरी हुन्न,’ उनले भने।
‘अब म जुनसुकै प्रशासन, जुनसुकै कार्यालयमा जोसुकैसँग नेपाल भाषामै कुरा गर्छु। मैले बोलेको नबुझे उनीहरूले अनुवाद गर्ने मान्छे राखून्। मलाई मेरो मातृभाषा बोल्ने हक हाम्रो संविधानले दिएको हो। कि यो राज्यले संविधान मान्दिनँ भन्नुपर्यो कि हामीले आफ्नो संवैधानिक हक उपभोग गर्न पाउनुपर्यो। संविधानमा जे छ त्यो हामी लिएरै छाड्छौं र नपुगेको थप्छौं पनि,’ उनले भने।
उनले अगाडि थपे, ‘जुन लिपि, भाषा र संस्कृतिले हामी विश्वसामु चिनियौं, त्यसैमा प्रतिगमन गर्ने? हामीले यसलाई जोगाएनौं भने पछि पछुताउनुको विकल्प रहँदैन।’
‘सहर विकास गर्दा त्यो ठाउँ कसरी बनेको छ, त्यहाँ के-के सम्पदा स्थल छन्, सडक आवश्यक छ कि छैन, सडक फराक पार्दा जात्रापर्वहरू बच्छ कि बच्दैन, त्यहाँको समुदायलाई असर पुग्छ कि पुग्दैन लगायत सबै विषयमा मिहिन अध्ययन हुनुपर्छ। मूलबासी नै विस्थापन हुने गरी सहर विकास गरेर के काम? त्यो विकास कसका लागि?’ उनले भने।
‘कुनै पनि नयाँ योजना ल्याउँदा त्यसले स्थानीयलाई राम्रो हुँदैन, उनीहरूको भलो हुँदैन र उनीहरू त्यसलाई अस्वीकार गर्छन् भने राज्यले उनीहरूको अस्वीकारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। स्थानीय आवाज व्यवस्थापन नगरी टेन्डर खोल्ने, कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी डोजर आतंक सुरू गर्ने प्रवृत्तिको हामी विरोध गर्छौं।’
‘स्मार्ट सिटी अवधारणाले कति धेरै उत्पादनशील भूमि सखाप पारेको छ। ती भूमि नरहेपछि हामी कसरी आत्मनिर्भर हुन सक्छौं? के सत्तामा बस्नेले जनताको भूमि खोसेर सधैं उनीहरूलाई दास बनाइरहने? के यही हो हामीले चाहेको विकास? सरकारले सुकुम्बासीलाई खोला किनारमा घर बनाउन दिने अनि यहाँको मूलबासीको घरखेत चाहिँ खोस्ने, के यही हो अग्रगमन?’
‘विकासको नाममा विनाशको यो क्रम जारी छ। हामीलाई भूमिहीन बनाउने र हाम्रो पहिचान समाप्त पार्ने विकास अब हामीलाई चाहिएको छैन। काठमाडौं जाग्दैछ, यहाँका नेवा:हरू जाग्दैछन्। राज्यले अब पनि हाम्रो आवाज सुनेन भने यसकाे ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ,’ उनले भने।
छुट्टिने बेला हामीले सोध्यौं, ‘तपाईं हिरासतमा भएको बेला तपाईंको नाममा कालिमाटी बजार नै बन्द भयो नि!’
जवाफमा उनले भने, ‘तपाईंले समुदायलाई जे दिनुभयो, समुदायबाट त्यस्तै पाउने हो। तपाईंलाई मैले सम्मान दिएँ भने मैले पनि तपाईंबाट सम्मान पाउँछु। हामीले नागरिकको मौलिक हकको कुरा उठायौं, नागरिकहरूले देखाएको यो माया त्यसैको परिणाम हो। मान्छेको भावनासँग जोडिएको घर बचाउन हामी लडेकाले उनीहरू खुसी भएका हुन्।’
इन्द्रचोकबाट सुरू मैनबत्ती र्‍याली कालिमाटीको जुन ठाउँमा आएर सभामा परिणत भयो, त्यहाँ पोखिएको अबिरको रातो सडकबत्तीको प्रकाशले टलक्क टल्किएको थियो। साभार : सेतोपाटीबाट